२०७८ साउन ३ गते १४:३२
सुधाले प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ कोर्सका लागि एमआरसिओजीको पार्ट १ परीक्षाको तयारी थालिन् । पहिलो चरणको परीक्षा पास गरिन् । पढाइको तयारीका लागि वीर अस्पतालमा काजमा आइन् । त्यहीबीचमा श्रीमान्लाई बेलायतमा ६ महिने तालिमको अवसर मिल्यो । सुधालाई पनि लाग्यो, सँगै गएर आफू पनि पढ्छु र काम खोज्छु । बेलायत गइन् र विज्ञापन हेर्दै कामका लागि निवेदन दिन थालिन् । उनले म्यानचेस्टर भन्ने ठाउँको एउटा अस्पतालमा काम पाइन् ।
त्यतिवेला कलेजले काम खोजिदिएर जनरल मेडिकल काउन्सिलको लिइदिने प्रक्रियाबाट जानुपथ्र्यो, तर सुधा भने आफ्नै प्रयासले सफल भइन् । श्रीमान् नेपाल फर्केपछि छोराछोरीलाई काठमाडौं ल्याएर एलिट स्कुलमा भर्ना गरियो । बेलायतमा फरक–फरक अस्पतालमा कामसहित छोटो अविधिका कोर्सहरू गर्ने, अन द जब तालिम गरेर परीक्षा दिने पद्धति थियो । कडा मानिने एमआरसिओजीको परीक्षा पनि सुधाले एकैपटकमा पास गरिदिइन् । १२ वर्षको क्लिनिकल र अध्यापन अनुभवपछि उनले बेलायतको एफआरसिओजी उपाधि पाइन् । बेलायतबाट विशेषज्ञ पढाइ सकेर सुधा सन् १९९४ को अन्तमा नेपाल फर्किइन् र १९९५ देखि प्रसूतिगृहमै काम थालिन् । पढाइ त पूरा भयो, तर पढाइअनुसारको दरबन्दी थिएन । बेलायत पढ्न जानुपूर्व उनी तृतीय श्रेणीमा थिइन्, फर्केर आएपछि पनि तृतीय श्रेणीमै । प्रसूतिगृहमा टिचिङ युनिटमा काम पाइन् । टिचिङ युनिटमा काम बढी हुन्थ्यो । पढाउनेले हप्ताको २ दिन २४ घण्टे ड्युटी गर्नुपथ्र्यो, अरूले एक दिन । दैनिक कामको समय पनि ९ देखि ५ सम्म, अरूलाई ९ देखि २ । तर, यसरी बढी काम गरेबापत शिक्षकको ‘रिकग्निसन’, तलबभत्ता आदि केही दिइएको थिएन । काममै रमाउने सुधा विद्यार्थीलाई पर्याप्त समय दिन्थिन् । उनलाई विद्यार्थीले औधी रुचाए र पछि नेसोगको चुनावताका धेरै मद्दत गरे ।
देशको राजनीतिक परिवर्तनको हिसाबले अत्यन्तै संवेदनशील समयमा उनले नेतृत्व पाइन् । ०६२/६३ को जनअन्दोलन थियो, पेसागत संस्थाहरू एउटै संगठन (पापड) बनाएर आन्दोलनमा थिए । यसमा आबद्ध ६ वटा संस्थाले पालैपालो २–२ महिनाको नेतृत्व लिने प्रावधान थियो । पत्रकार महासंघपछि पापडको नेतृत्वमा चिकित्सक संघ आउनुपर्ने थियो । सुधालाई प्यानलमा पार्न नखोज्नेहरू जनआन्दोलनमा चिकित्सक संघको उपस्थिति कमजोर हुन्छ भनेर प्रचार गर्दै हिँडेका थिए । तर, उनले पापडको नेतृत्व लिइन् । यो उनका लागि नेतृत्वक्षमता प्रमाणित गर्ने चुनौती र अवसर पनि थियो । जनआन्दोलन चर्किसकेको थिएन । दलहरूलाई राजाले निषेधको अवस्थामा पुर्‍याएका थिए । पेसागत संगठनहरू लोकतन्त्रका लागि अगाडि बढ्दै थिए । माइतीघर मण्डला निषेधित क्षेत्र थियो । पापडले निषेधित क्षेत्र तोड्यो । मण्डलामा सुधालगायत पापडका नेतृत्वकर्ताहरूले सम्बोधन गरे ।
स्वास्थ्यमन्त्री निक्षशमशेर जबरा थिए । मन्त्रीले सुधालाई मन्त्रालयमा बोलाए । ५ बजेको थियो । मन्त्री निक्षले उनलाई भने, ‘एक लाख मान्छे सडकमा उत्रिएर आन्दोलन सफल हुन्छ ? किन यस्तो गर्नुहुन्छ ? हामी तपाईंलाई कारबाही गर्छौं ।’ तर, मन्त्री जबरा निकै स्मार्ट थिए । सुधाले मन्त्रीलाई भनिन्, ‘हजुर राजासँग एकदम नजिक हुनुहुँदोरहेछ त सम्झाइदिए भयो नि ! एक लाख जनता भनेर कम नआँक्नुस्, धेरै जनता बाहिर बसेर हेरिरहेका छन् । आन्दोलन चर्कियो भने सबैजना यता ढल्किनेवाला छन्, यो म्यासेज पुर्‍याइदिनुभए हुन्छ,’ उनले थपिन्, ‘बाँकी, कारबाहीले केही फरक पर्दैन, डाक्टर हुँ औषधिपसलमा वा एउटा रुखमुनि बिरामी जाँचेर पनि आफ्नो ज्यान त पाल्न सकिहाल्छु । केही लोभ र डर पनि छैन मलाई ।’
मन्त्रालयले स्पष्टीकरण पनि सोध्यो । जवाफ ठेलिदिइन्, ‘पेसागत रूपमा म डाक्टर हुँ र सरकारी कर्मचारी पनि हुँ । त्यसकारण मैले दुईवटै धर्म पालना गर्नुपर्छ । के गर्नुपर्छ मलाई सबै राम्रोसँग थाहा छ, नियमबमोजिम गरिने जुनसुकै कारबाही सहन्छु ।’ कारबाही नै चाहिँ गर्न सकेनन्, आन्दोलन सफल भइहाल्यो । आन्दोलनको तयारीलगायत अन्य विषयमा पनि धेरै मिटिङ पर्थे । संघमा आफैँले बनाएको टिम थिएन । त्यसमा पनि चुनावको रणनीतिअनुसार देशभरबाट कार्यसमितिमा डाक्टरहरू राखिएका हुन्थे । कार्यसमितिमा अध्यक्ष मात्र फरक प्यानलबाट जितेर आएको । बैठकका लागि भेला गर्नसमेत मुस्किल । केही पदाधिकारी र सदस्यको साथ लिएर उनले आन्दोलनको मोर्चा तताइन् ।
जनआन्दोलनपछि फेरि स्वास्थ्यसंस्था तोडफोडका ठूला–ठूला घटना भए । त्यस्ता परिस्थितिको पनि उनले सामना गरिन्, जसले सोसिअल ‘रिकग्निसन’ दिएको बुझाइ छ डा. सुधाको । जनआन्दोलन सफल भएपछि सरकारले आन्दोलन घाइते उपचार समन्वय समिति गठन गर्‍यो, त्यसमा समेत सुधालाई नै जिम्मेवारी आयो । त्यसको अफिस संघकै एउटा कोठामा राखेर काम सुरु गरिन् । त्यति ठूलो आन्दोलनका घाइतेको प्रकृतिका आधारमा वर्गीकरण र निराकरण उनकै नेतृत्वमा भयो । धेरै विशेषज्ञ चिकित्सकले उनलाई साथ दिए, जसका प्रति उनी सदा आभारी छिन् ।
पदस्थापन वीरगन्ज भए पनि उनी प्रसूतिगृहमा पढाउने पनि जिम्मेवारी भएकाले त्यहीँ सरुवा मागिरहेकी थिइन् । सुरुको एक महिना त काजमा काठमाडौं बसिन् । कर्मचारीले एक महिनाभन्दा बढी काजमा राख्न मिल्दैन भने । त्यसवेला स्वास्थ्यमन्त्री कमल थापा थिए । मन्त्रीलाई भेटिन्, पढाउनुपर्ने हुनाले सरुवा हुन्छ भने पनि काम भइरहेको थिएन । केही महिनापछि एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्रीले देखेर सोधे, ‘तपाईंको काम भयो ?’ उनले छैन भनेपछि मन्त्रालय पुगेर मन्त्रीले रोकिनुको कारण सोधखोज गरेछन् । त्यसपछि पोस्टिङ प्रसूतिगृहमै भइहाल्यो । यसरी उनलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिएर मन्त्रालयले सहयोग गर्‍यो ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए । सामान्य प्रशासनमन्त्री पम्फा भुषाल, मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे थिए । सचिव हुने सूची लिएर मुख्यसचिव मन्त्रीकहाँ गएछन् । मन्त्री भुषालले सोधिछन्, ‘यत्रो परिवर्तन भयो, यति धेरै सचिव बन्दै छन्, खै महिलाको नाम ?’ त्यतिवेला निजामतीतर्फ सिनियर महिला रहेनछन् । वरिष्ठ खोज्दै जाँदा सुधाको नाम पर्‍यो । महिला सहभागी गराउँदा उनी सचिव भइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जनसंख्याको छुट्टै सचिव हुने व्यवस्था गरेकाले सुधा कामु सचिव बनिन् । कामु स्वास्थ्यसचिव डा. दीर्घसिंह बम थिए । सुरुमा महिला चाहिन्छ भन्ने पम्फा भुषाल ६ महिने कामु सचिवको अवधि सकिन लागेपछि तर्किएर हिँड्न थालिन् ।
सरकार परिवर्तन हुने समय भएको थियो । सुधाले आग्रह गर्दा पनि अर्को सरकार आएर गरिहाल्छ नि भनेर पन्छिइन् । सुधाको जीवनको पीडादायी समय थियो त्यो । प्रसूतिगृहमा रहेको उनको पदमा अर्को मान्छे आइसकेको थियो । सचिव भइसकेको मान्छे फेरि कहाँ जाने ? उनको पद सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखिएको थियो । काम केही थिएन, खालि हाजिरी गर्ने । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा फर्काइदिनुस् भन्दा त्यहाँ अर्को सचिव छ हुँदैन भन्ने कुरा आयो । सामान्यमा हाजिर गरेर कति दिन बस्ने ?
६ महिना जनसंख्याको कामु सचिव हुँदा सुधाकै सल्लाह र काममा सरकारले निःशुल्क प्रसूति कार्यक्रम घोषणा ग¥यो । उनी त्यो कार्यक्रमको अनुगमन गर्न र प्रभावकारी बनाउन जिल्ला–जिल्ला घुमिन् । पहिला जे काम सुधाले गरिरहेकी थिइन्, त्यही कार्यविभाजन र त्यति नै काम पाउँदा पनि डा. प्रवीणलाई चित्त बुझेन । रातदिन मन्त्रालयमा किचकिच हुन थाल्यो । अन्ततः उमाकान्तले सुधालाई जनसंख्यामा सारे र प्रवीणलाई स्वास्थ्यसचिव बनाए । जनसंख्यामा सरेपछि आफ्नो कार्यविभाजनअनुरूप जिम्मेवारीको सदुपयोग गर्दै सुधाले संयुक्त राष्ट्रसंघको न्युयोर्क र जेनेभाका साधारणसभामा भाग लिइन् । व्यक्तिगत रूपमा पनि उनको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निकै बलियो बन्यो ।
माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उनीहरूसँगै गएर नेपालका विषय राखिन् । अंग्रेजी भाषा र विषयवस्तुमा समेत पकड भएकाले सुधा यस्ता कार्यक्रममा रोजाइमा पर्थिन् । पछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी फेरि स्वास्थ्यतर्फ सरुवा भइन् र प्रवीण जनसंख्यातर्फ सरे । तर, पछि स्वास्थ्यमा राजेन्द्र महतो मन्त्री भएर आए । महतोले सुधालाई स्वास्थ्यमै कायम राख्छु भनेका थिए । तर, प्रवीणले आफू स्वास्थ्यमा सर्न मन्त्रीसित किचकिच गरिरहेका थिए । उनले मन्त्रीलाई भनिन्, ‘तपाईंलाई अप्ठ्यारो पर्छ भने म बिदामा बसिदिन्छु, तर स्वास्थ्यबाट मलाई हटाउनचाहिँ नहटाउनुस् ।’ मन्त्रीले पहिला हुन्छ भनेर तर पछि थाहै नदिई दोस्रोपटक जनसंख्यामा सारिदिए । वरिष्ठतामा आफू अघि हुँदाहुँदै यसरी सरुवा गरेकोमा सुधालाई निकै तनाव भयो । उनले अढाई वर्ष बाँकी रहँदै सचिव पदबाट राजीनामा दिइन् ।
अहिलेको विन्दुमा उभिएर पछाडि फर्केर हेर्‍यो भने सुधालाई जिन्दगी फुल अफ स्ट्रगल, फुल अफ च्यालेन्ज, फुल अफ सक्सेस फुल अफ मोटिभेसन लाग्छ । ‘आफूसँग क्षमता नभएको भए धेरै मान्छेले दबाउन खोज्थे नि ! जीवनमा सेल्फ कन्फिडेन्स महत्वपूर्ण हुन्छ । बच्चालाई आमाबुबाले सेल्फ कन्फिडेन्समा सपोर्ट दिनुपर्छ । छोरीलाई विवाह गरेर गएपछि नहेर्ने गरिन्छ, तर मेरी आमाले सुत्केरी हुँदादेखि सबै कुरामा हेल्प गर्नुभयो,’ सुधा भन्छिन् ।
श्रीमान्को सहयोग उनका लागि विशेष महत्वपूर्ण छ । उनीहरूले पैसा नकमाएका होइनन्, तर पैसा कहिल्यै प्राथमिकतामा परेन । अहिलेको सम्पत्ति दुवैको दुःखको आर्जन र त्यसको सदुपयोग मात्रै हो । उनी जीवनप्रति सन्तुष्ट छिन् । अहिले उनी आत्मसंस्मरण लेखन, नेपालको सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमको पुनरावलोकनका लागि परामर्श दिने काम र स्त्रीरोग सेवा प्रदान गर्नमा व्यस्त छिन् । नेपाल चिकित्सक संघको पूर्वअध्यक्ष र जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका कारण उनी राजनीतिक विकासक्रम र सामाजिक मुद्दाहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेकी छिन् । स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, सेवामा विपन्न वर्गको न्यून पहुँच र स्वास्थ्य सूचकहरूमा धनी–गरिब, सुगम–दुर्गमबीच बढ्दो खाडल उनका सरोकारका विषय हुन् । बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधहरूको बढ्दो बिगबिगी र दण्डहीनता देखेर उनी चिन्तित छिन् ।
केही समय अगाडी प्रकाशित भएको यो लेख हामीले पुन प्रकाशित गरेका हौं।